५३० कर्मचारी कारवाहीमा, के होला भविष्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
५३० कर्मचारी कारवाहीमा, के होला भविष्य ?
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ । ठीक समयमा कार्यालय नआउने र तोकिएको पोशाक नलगाउने ५३० कर्मचारी कारवाहीको घेरामा परेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले साउन यता गरेको अनुगमनका क्रममा १४० कार्यालयका ५३० कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हो ।
केन्द्रले गरेको अनुगमन ठीक समयमा कार्यालयमा नआउने ३१८ र तोकिएको पोशाक नलाउने १६२ गरी ५३० जना कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए । उनले कारवाहीमा परेका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
याे पनि पढ्नुस पूर्वी नवलपुरमा मात्रै ४ महिनामा भ्रष्टाचारका ३९ मुद्दा दर्ता
केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष ५२ जिल्लाका एक हजार १४० कार्यालय अनुगमन गर्दा करीब दुई हजार ३४० जना कर्मचारीलाई समय पालना नगरेका र पोशाक नलगाएकोमा कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस वडा अध्यक्ष निलम्बनमा परेपछि...
केन्द्रका सम्पत्ति विवरण शाखाका एकराज पोखरेलले सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए । उनका अनुदार सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि केन्द्रले ताकेता गरिरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता : मन्त्री बस्नेत
ट्याग्स: corruption, National vigilance center